Muuri News Network » Daawo Sawirro: Meydadka Shabaabkii caawa weeraray Villa Somalia oo lasoo bandhigay &Khasaaraha oo la ogaaday
Daawo Sawirro: Meydadka Shabaabkii caawa weeraray Villa Somalia oo lasoo bandhigay &Khasaaraha oo la ogaaday
Feb 23, 2018 - Comments off
Wararkii ugu danbeeyay ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la dilay ugu yaraan 4 ka mida dableydii Alshabaab ee weerarka qorsheysan ku qaaday xarunta Madaxtooyada laga galo.
Laba qarax ayaa ka dhacay magaalada oo midkood lala beegsaday iridka laga galo Madaxtooyada, halka midka kale uu ka dhacay Isgoyska FIAT ee u dhow xarunta Nabadsugidda ee NISA.
Qaraxyada oo loo adeegsaday gawaari lasoo buuxiyay ayaa waxaa xigay rasaas aad u xoog badan oo maleeshiyo ka tirsan Alshabaab iyo ciidamada dowladda dhex marayey, waxaana 4 ka mida dableyda Alshabaab ay sii galeen xarunta Dhagaxtuur oo ciidamo ay degan yihiin iyo dhismooyin ku dhow Hotel Siyaad iyo xeydaabka magaalada, iyadoo rasaastu ay weli si goosgoos ah u dhaceyso.
Gaadiidka Gurmadka degdegga ah ee Amiin ayaa sheegay in qarixii ka dhacay Agagaarka xarunta NISA ee KM 0 ay ku dhinteen 18 qof, iyadoo 20 kale ay ku dhaawacmeen, laakiin qaraxa kale ee iridka Madaxtooyada iyo rasaasta dhaceysa ayaanay jirin wax war ah oo laga soo saaray.
Weerarka ayaa waxaa sheegtay Alshabaab, iyadoo ku tilmaantay howlgal lagu qaaday Villa Somalia, iyadoo uu weerarku u muuqdo mid loola dan lahaa xarunta Madaxtooyada Soomaaliya oo ilaa caawa rasaastu ka dhaceyso dhismooyin ku dhow.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga ayaa sheegay in la soo afjaray weerar caawa lagu qaaday Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo la dilay Shan dabley ah oo ka tirsan Alshabaab, lagana hortegay.
Xaaladda ayaa weli kacsan magaalada Muqdisho, iyadoo rasaas goosgoos ah la maqlayo, iyadoo la xiray guud ahaan isu socodkii gaadiidka.